June 9, 2019 Cele Love 0
ချစ်သူ/ဇနီးမောင်နှံတွေ ဘ၀ဆက်တိုင်း အတူတူဆုံနိုင်မယ့် ကုသိုလ် .. ဘ၀တိုင်း ဆုံချင်လျှင်အခါတပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ဘဂ္ဂတိုင်း သုသုမာရဂိရိမြို့တွင် သီတင်းသုံးတော်မူစဉ် နကုလပိတာ နကုလမာတာ အမည်ရှိသော သူကြွယ် ဇနီးမောင်နှံအိမ်သို့ ကြွတော်မူသည် ….။ သူကြွယ် ဇနီးမောင်နှံတို့သည် မြတ်စွာဘုရားအား ရိုသေစွာရှိခိုးလျက် သင့်လျော်သောနေရာ၌ ထိုင်နေကြပြီးလျှင် နကုလပိတာ […]
ထူးချွန်သော်လည်း မတတ်နိုင်ရှာတဲ့ သူလေး ….
ထူးချွန်သော်လည်း မတတ်နိုင်ရှာတဲ့ သူလေး …. မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ပွင့်ဖြူမြို့နယ်၊ကုန်းဇောင်း အ.ထ.က မှ (ဖဋ-၁၅၅)ဂုဏ်ထူးငါးဘာသာ ၊အမှတ်ပေါင်း၅၁၇မှတ်ဖြင့် ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သမီးလေးမေသန္တာလွင်ထွန်း သူမဝါသနာက ဆရာဝန်မကြီး တဲ့ … မကွေးတိုင်း၊ပွင့်ဖြူမြို့နယ်၊ ဇီးကိုင်းအုပ်စု၊ဝဲဒေါင့်ကျေးရွာက ဦးမြင့်ထွန်း+ဒေါ်နုနုစိန်တို့ရဲ့ သားသမီးသုံးယောက်အနက်အငယ်ဆုံးသမီးလေးး … အဖေက လယ်ယာကျွဲနွားမရှိတဲ့ […]
မျက်နှာ က အဖုအထစ်အစက်အပြောက် နဲ့ တင်းတိတ် အစရှိတာတွေ ကို လက်တွေ့ပျောက်စေ မည့် အုန်းမှုတ်ခွက်ဆေးနည်း
မျက်နှာ က အဖုအထစ်အစက်အပြောက် နဲ့ တင်းတိတ် အစရှိတာတွေ ကို လက်တွေ့ပျောက်စေ မည့် အုန်းမှုတ်ခွက်ဆေးနည်း ” လူသိနည်းသော “ အုန်း မှုတ် ခွက် ဆေးနည်း များ… ” အခုပြောပြမယ့် ခွက်ကလေးက အုန်းမှုတ်ခွက်လေးအကြောင်းပါ ။ ဖတ်ဘူးသမျှ နဲ့ကိုယ်တွေ့ဆေးဖက်ဝင် […]
ကြက်ဥ(၂)လုံး နေ့တိုင်း ပုံမှန်စားပေးခြင်းဖြင့် ရရှိလာမယ့် အံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူးများ
ကြက်ဥ(၂)လုံး နေ့တိုင်း ပုံမှန်စားပေးခြင်းဖြင့် ရရှိလာမယ့် အံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူးများ ကြက်ဥရဲ့ အာနိသင်နဲ့အစွမ်းထက်ပုံတွေကို လူတော်တော်များများက သိချင်ကြသလို၊ အကြိမ်ကြိမ်အမေးခံရတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်ဥရဲ့အာနိသင်တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရှိနိုင်အောင်လို့ ခုပဲဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကိုကြက်ဥ (၂) လုံးပုံမှန်စားပေးရင် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါနော် .. (၁) အမြင်အာရုံကောင်းမွန်စေတယ် ” ကြက်ဥထဲမှာပါဝင်တဲ့ […]
ချစ်သူကို လက်ထပ်နိုင်ဖို့ တပြိုင်တည်း အလုပ် (၄) ခု လုပ်ပြီး ကြိုးစားနေတဲ့ အမျိုးသား အချစ်အတွက်ဆို ဘာမဆို လုပ်မယ့် လူတစ်ချို့ ရှိတယ်ဆိုတာကို ဒီ အမျိုးသားကို တွေ့မှ ယုံကြည်သွားပါတယ် ။ သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ သူ့လိုလူကို ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ အမျိုးသမီးကတော့ သိပ်ကံကောင်း လှပါတယ် […]
ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်အတွင်း ဝိတ်ကျသွားစေမယ့် ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော နည်းလမ်းများ …
ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်အတွင်း ဝိတ်ကျသွားစေမယ့် ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော နည်းလမ်းများ … လုပ်ငန်းခွင်မှ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း၊ အိပ်ရေးပျက်ခြင်း၊ အသင့်စား အစားအစာများ အလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းတို့က သင့်ကို ဝိတ်တက်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဝိတ်တက်လာလို့ စိတ်ညစ်နေသူတွေအတွက် (သို့မဟုတ်) ရက်တိုဝိတ်ချချင်သူတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ ရှိပါတယ် …။ အခုဖော်ပြပေးမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ၂ […]
ကိုယ်ဝန် နုချိန်မှာ စားသုံးလျှင် ကိုယ်ဝန် ပျက်ကျမှုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အစားအစာများ …
ကိုယ်ဝန် နုချိန်မှာ စားသုံးလျှင် ကိုယ်ဝန် ပျက်ကျမှုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အစားအစာများ … ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန်မှာဆိုလျှင် သာမန်အချိန်ထက် အစားအသောက် ၊ အနေအထိုင် ဆင်ခြင်ရတာကို သိရှိပြီး ဖစ်မှာပါ ။ ကိုယ်ဝန် ရှိပြီဆိုတာနှင့် နားလည်တတ်ကျွမ်းသူတွေဆီမှ ဆာင်ရန်၊ရှောင်ရန် နည်းနာများကို သိရှိထားသင့်ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် […]
သင့်ခေါင်းထဲက ထုတ်ပစ်သင့်တဲ့အရာ ၆ ခု ✍✍
သင့်ခေါင်းထဲက ထုတ်ပစ်သင့်တဲ့အရာ ၆ ခု ✍✍ အောင်မြင်ချင်ရင် သင့်ခေါင်းထဲက ထုတ်ပစ်သင့်တဲ့အရာ ( ၆ ) ခု ၁။ သင့်ကို ဂရုမစိုက်တဲ့သူတွေကို သင်ဂရုစိုက်စရာ မလိုပါဘူး” တစ်ချို့လူတွေက .. သူတုိ့ကို ဂရုစိုက်လေလေ၊ သင့်ကို ပစ်ထားလေလေပါပဲ။ဒီတော့ … သူတို့ကို […]
အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် စိတ်ဒဏ်ရာရှင် (၁၇)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတဦး အဆုံးစီရင်ခွင့်ရ
အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် စိတ်ဒဏ်ရာရှင် (၁၇)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတဦး အဆုံးစီရင်ခွင့်ရ လိင်အဓမ္မပြုကျင့် ခံခဲ့ရရာကနေ နှစ်ရှည် လများ စိတ် မကျန်းမမာဖြစ်၊ စိတ်ကျရောဂါ ရသွားခဲ့တဲ့ နယ်သာလန် နိုင်ငံသူ မိန်းကလေး တဦးဟာ အစိုးရ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုယ် အဆုံး စီရင်ခွင့် ရသွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိ ပါတယ် […]
၁၀ တန်း ကျာင်းသူတစ်ဦး ၆ဘာသာဂုဏ်ထူး မရသဖြင့်အဆိပ်သောက်သေဆုံးမှု့ ဖြစ်ပွား ၆ဘာသာဂုဏ်ထူး မရသဖြင့် ဆယ်တန်း ကျောင်းသူတစ်ဦး အဆိပ်သောက်သေဆုံးမှု့ ဖြစ်ပွားမှု့ သတင်း အပြည့်အစုံ သေဆုံးသည့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကျောင်းသူမပွင့်ဖြူစိုးသည် ဘာသာစုံဂုဏ်ထူးကို မျှော်မှန်းထားသူဖြစ်ပြီး သူမ၏ရည်မှန်းချက် မပြည့်မှီခဲ့လို့ အဆိပ်သောက်သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူက သုံးသပ်ကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူက ပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါ […]